ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ထိုင်းမှာ တရားဝင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ဆုံမှတ်၊ အရှေ့အာရှနဲ့ တောင်အာရှ တို့ကို ဆက်သွယ် ပေးရာ လမ်းဆုံ အဖြစ် အချက်အချာ ကျမှုများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လူနေမှုစားရိတ် သက်သက်သာသာနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ မြို့ပြ အခင်းအကျင်း၊ မီး၊ ရေ၊ စီးပွားရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီ များကြောင့် တနေ့တခြား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လုပ်သား လိုအပ်ချက် ဟာလည်း တိုးတက်မှု ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ပါဝင်လာ နေပါတယ်။ သည်လို လုပ်အား လိုအပ်မှု ကြောင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများက တရားမ၀င် လာရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေ ကြသူများကို သိသာသိစေ၊ မမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ၁၀ယောက် အဖမ်းပြကာ အယောက် တစ်ရာမက ပြန်ခိုးသွင်း နေကြတာ ထိုင်းရဲများ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် အလုပ်လုပ် လိုသူများ အတွက် ကတော့ ပညာရေး အဆင့်မြင့်သူ များကို အလွန်ပင် အလိုရှိကြပါတယ်။ အလွန် အသုံးဝင်ရာ နယ်ပယ်မှ မဟာဘွဲ့ ရရှိထားသူများကို ထိုင်းနိုင်ငံသား လျှောက်ထားရန် ဆွယ်သည် အထိပင် အလိုရှိ ကြပါတယ်။ လောလောဆယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလိုရှိသော ကာယ၊ ဉာဏ လုပ်သားများမှာ အစဉ်လိုက် အားဖြင့်၁.
ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူများ၂. ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၃. စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြပြီး www.jobdb.com တွင်အလုပ် ရှာဖွေ နိုင်ကြပါသည်။ work permit ရရှိပြီးသူများ အနေဖြင့် credit card ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရကာ တိုက်ခန်းများ၊ ကားများကို စိတ်ကြိုက် ၀ယ်နိုင်ကြပြီး၊ နိုင်ငံခြားသား များမှာ မီတာ၆၀ ပတ်လည် ရှိသော မြေကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် work permit ရရှိပြီး သက်တမ်း ၃နှစ်ရှိသူ အမျိုးသမီး များနှင့် သက်တမ်း ၅နှစ်ရှိသူ အမျိုးသားများ Permanent residence လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ရှမ်းလူမျိုး ပညာရှင် များကိုမူ ထိုင်းများနှင့် မျိုးနွယ် တူများဟု ဆိုကာ အထူး အခွင့်အရေးများ ပေးကာ ဆွဲဆောင် စည်းရုံးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပေးကာ ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် တန်းတူအခွင့် အရေး ခံစားခွင့် ရလေသည်။ ထိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူ မြန်မာများအနေဖြင့် ထိုင်းစာနှင့် စကား ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ထားခဲ့ နိုင်လျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အသက်၂၀ - ၂၅ ၀န်းကျင် ထိုင်းလူမျိုး များမှာ နောက်ပိုင်း ပညာရေး စနစ်သစ်ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကား အသင့်အတင့် ပြောနိုင် သော်လည်း ကျန်ထိုင်းများမှာ အခြေခံ လောက်ပင် မပြောတတ်၊ နားမလည် ရုံသာမက နိုင်ငံခြားသားနှင့် စကားပြောရမှာ စိုးရွံ့ ထွက်ပြေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြောပြန်လျှင်လည်း ဘယ်လိုမှ နားမလည် နိုင်လောက်သော ထိုင်းသံဝဲမှု ကိုကြုံတွေ့ နိုင်လေသည်။ နိုင်ငံခြားပြန် ပညာတတ်နှင့် ရာထူးအဆင့် မြင့်မားသူ များကမူ အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင် ပီသစွာ ပြောဆိုနိုင် လေသည်။ ထိုင်းလူမျိုးများဧ။်လက်သုံးစကား "ဆဘိုင်၊ဆဘိုင် " ကိုလည်း နားလည်ပါမှ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ် ပေမည်။ အကြောင်းမှာ အေးဆေးပေါ့ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသော ထိုစကား ကဲ့သို့ပင် ကျင့်ကြံသဖြင့် တချိန်လုံး တောင်းဆို နေရသော တွန်းအားပေးမှု ကို စိတ်ရှည်ရှည် သုံးစွဲရမည် ဖြစ်သောကြောင့် တည်း။ ထိုင်းများဧ။် အပြုံးကိုလည်း နားလည်မှု မမှားပါမှ ဒုက္မ္ခ ရောက်မှုမှ လွတ်ကင်းပါမည်။ Land of Smiles ဟု အမည်တွင် သော ထိုင်းများ သည် ချစ်၊ မုန်း၊ အားကျ၊ မနာလို၊ ပျော်၊ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ဆိုး၊ ကျေနပ်သော အခါတိုင်း ပြုံးလေရာ ကိုယ့်ကိုပြုံးပြီး ဆက်ဆံ တိုင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်း သည်ဟု ထင်မှတ် မှားပါက မြန်မြန် ဒုက္မ္ခ ရောက်ပေမည်။ လမ်းမှားလျှင် မြေပုံကို အားကိုးတတ်သော အလေ့အကျင့် ကိုလည်း ပျိုးထောင်ပါမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်သနား ရာ ရောက်ပေမည်။ မဟုတ်လျှင် ပြီးလျှင် ပြီးရော လမ်းညွှန်လေ့ ရှိသော ထိုင်းများ ကြောင့် မလိုရာ ရောက်ကာ လမ်းပျောက် တတ်လေသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာပြည်တွင် အကျင့်ပါ ခဲ့သည့်အတိုင်း ဘဏ်ကိုမယုံဘဲ ရှိသမျှငွေ ကိုအိတ်ထဲ ထည့်ထား တတ်သော မြန်မာ့ အကျင့်ကို သိပြီး ဖြစ်နေသော ခါးပိုက်နှိုက်များက မြန်မာစကား ပြောသံ ကြားသည်နှင့် နောက်ယောင်ခံ လိုက်ကာ အလစ်သုတ် လေ့ရှိကြောင်း ဈေးအများဆုံး တည်ရှိရာ ဆူခမ်ဗစ် ရပ်ကွက် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးက အတည်ပြု ပြောကြားလေသည်။ သည်မျှဆိုလျှင် ထိုင်းတွင်အလုပ် လုပ်နိုင်ရန် ဗဟုသုတ စုံလောက်ပြီ ဟု ယူဆမိပါသည်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 10:35 AM
ဒီပို့စ်လေးကို တကယ်သဘောကျတယ် မမ။ တနေ့ကပဲ အငှားကားစီးတာ ဘတ်တရာလမ်းကို လေးရာကျအောင်လှည့်ပတ်မောင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဘာသာစကားလဲမတတ်တော့ ပြောရလဲအခက်ဖြစ်နေတာ။ ခုလို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ သိရတာ အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ် မမ။
Workpermit holder can get credit card is not true. It depends on income.
Anyhow thanks for your post.